ပညာတတ်များသို့အိတ်ထဲမထည့်ပေးစာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » ပညာတတ်များသို့အိတ်ထဲမထည့်ပေးစာ
ပညာတတ်များသို့အိတ်ထဲမထည့်ပေးစာ
Posted by YingLamp on Dec 26, 2011 in Society & Lifestyle | 27 comments
အားလုံးပဲ Merry Christmas ပါ …
ကိုယ့်အိမ်နဲ့ ဝေးနေတဲ့ အချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတွေဆီက သတင်းစကားတခုခု .. တွေ့ ဖို့ ဆုံဖို့အကြောင်းတခုခုကိုပဲ မျှော်နေမိကြမယ် ထင်တယ် .. အထူးသဖြင့် တနဂ်နွေလို နေ့မျိုးပေါ့ ..
ဒီမှာတော့ မြန်မာ ၄၀၀ ကျော်ရှိတယ်လို့ အရင်ကသိခဲ့ ဖူးတယ် .. ၃၅၀ ကျော်လောက်က စက်ရုံအသီးသီးမှာ အလုပ်လုပ်ကြတယ် လို့လဲ သိခဲ့ဖူးတယ် .. စက်ရုံမှာလုပ်ကြတယ်ဆိုပေမယ့် စက်ရုံလုပ်သားက အစ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအထိ မြန်မာတွေ ရှိကြပါတယ် .. ကိုယ်တွေက စက်ရုံမှာနေရတော့ စက်ရုံထဲကလူတွေရဲ့ ခံစားချက်ကိုပိုနားလည်တယ် .. တနေ့ ၁၀ နာရီကနေ ၁၂ နာရီထိ အလုပ်တွေလုပ် … တလ တလ ရတဲ့ လခလေးကို ငွေလွှဲခ မတန်တဆပေးပီး ငွေလွှဲနေရတဲ့သူတွေက အများစုပါ ..
ကျန်တဲ့ လူနဲစုကတော့ ကျောင်းတွေ ကုမ္ပဏီတွေမှာအလုပ်လုပ်ကြတယ်လို့ သိတယ် .. ဘာလုပ်ကြတယ်ဆိုတာတော့ မသိဘူး .. သူတို့ ဟာသူတို့ ကုမ္ပဏီသန့်ရှင်းရေးပဲဖြစ်ဖြစ် ရုံးမာလီပဲဖြစ်ဖြစ် ကျောင်းပြာတာပဲဖြစ်ဖြစ် … ကျောင်းဆရာပဲဖြစ်ဖြစ် .. အဲဒီလူတစုက “ပညာတတ်တွေ” လို့ သူတို့ ကိုယ်သူတို့ ခံယူထားကြတယ် လို့ သိရတယ်.. နို့. ပညာတတ် လို့ ဆိုရင်ဖြင့် ပညာတတ်တွေမှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ သဘောထားပြည့်ဝမှုတွေ စာနာထောက်ထားစိတ် ပူးပေါင်းလိုစိတ် ကိုယ့်လူမျိုးချင်းချင်းချစ်တဲ့စိတ်တွေ ရှိကြမယ်လို့ ကိုယ်တွေ ထင်မိပါတယ် .. ကိုယ်သာအတော် ကိုယ်သာအတတ် ကိုယ်သာအကောင်း ဆိုပီး လူတွေ့ တိုင်း နှိမ်ချင်နေတဲ့စိတ်တွေ ပညာတတ်တွေမှာ မရှိစကောင်းပါလို့ လဲ ကိုယ်တွေထင်မိပါတယ်လေ .. ဒီတော့ကာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပညာတတ်အစစ် ဟုတ်မဟုတ် အဲဒီပညာတတ် တွေကပဲ စဉ်းစားချင့်ချိန်ကြည့်နိုင်ပါတယ် ..
ဘယ်သူကစပြီး ကင်ပွန်းတပ်လိုက်တယ်တော့ မသိဘူး .. စက်ရုံပိုင်းမှာလုပ်တဲ့ မြန်မာတွေကိုတော့ “စက်ရုံအသိုင်းအ၀ိုင်း” .. ပညာတတ်ဆိုတဲ့ လူတွေကတော့ “ကျောင်းအသိုင်းအ၀ိုင်း” ဆိုပဲ .. ကိုယ်တွေက သံရုံးထဲကို ၀င်ထွက်ခွင့်ရနေတဲ့ လူတန်းစားတရပ်ထဲက လူမဟုတ်တော့ စက်ရုံလုပ်သားတွေနေရာကပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ခံယူတယ် .. စက်ရုံအသိုင်းအ၀ိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ကျောင်းအသိုင်းအ၀ိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးက အိမ်နဲ့ ဝေးနေကြတဲ့ လူတွေပါ ..
ကိစ္စတခုကို စကားပြောဖြစ်ကြတုန်းက လူတယောက်ကပြောသွားဖူးတယ် .. “စက်ရုံအသိုင်းအ၀ိုင်းကလူတွေက ကျောင်းအသိုင်းအ၀ိုင်းကလူတွေလို တွေးခေါ်တတ်မှာမဟုတ်ဘူး အတွေးအခေါ်တူမှာမဟုတ်ဘူး ” ဆိုပဲ .. သိပ်မိုက်ရိုင်းတဲ့ စကားလို့ ထင်မိပါတယ် .. စက်ရုံအသိုင်းအ၀ိုင်း ကလူတွေက ဦးဏှောက်မရှိ ပညာ မတတ်ကြတဲ့သူတွေလို့ တထစ်ချ လက်ခံထားပုံပါပဲ .. စက်ရုံအသိုင်းအ၀ိုင်း လို့ ဝါးလုံးရှည်နဲ ရမ်းးပီး သူသုံးနှုံးလိုက်တာဟာ စက်ရုံနဲ့ ပတ်သတ်နေတဲ့ လူတွေကို သိပ်အထင်သေးရာရောက်ပါတယ် .. သူ့ ကိုယ်သူလဲ သိပ်ဘ၀င်မြင့်ရာရောက်နေပါတယ် .. ပြောခံရတဲ့သူက စက်ရုံမှာလုပ်နေပေမယ့် ပညာတတ်လို့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့ သူပါ .. သိမ်းကြုံးပြီး လူစုတစုကို လူစုတစုက အထင်သေးနေတာတော့ သိပ်ကြည့်လို့ မကောင်းဘူး .. အလုပ်ထဲမှာ တရုတ်၊ ကုလား၊ အဖြူ၊ အမည်း လူပေါင်းစုံနဲ့ ရင်ပေါင်းတန်းပြီးလုပ်နေကြရတာ .. လူမျိုးခြားတွေက ကိုယ်တွေကို လေးလေးစားစားဖြစ်သလောက် ကိုယ့်လူမျိုးချင်းချင်း ဖယ်ကျဉ်ထားတာတွေလဲ သိပ်ကြည့်လို့ မကောင်းဘူး .. ကြည့်လို့မကောင်းပေမယ့် မြင်မြင်နေရတယ်ဗျ ..
ဒီမှာ .. ခင်ဗျားတို့ ပဲ လူရာဝင်တယ် .. ခင်ဗျားတို့ ပဲ လူတောတိုးတယ် … ခင်ဗျားတို့ ပဲ ပြောတတ်ဆိုတတ်တယ် .. ဒီလိုလား .. ထားပါတော့ .. ဟုတ်ရင်လဲ ဟုတ်ကြပေမပေါ့ .. ကျုပ်တို့ က လူတောမတိုးတာမဟုတ်ဘူးဗျ .. အကုသိုလ်မရှာတာ ..
စကားလုံးကြီးကြီးတွေချပြောကြကြေးဆို ဘယ်မှာလဲ မျိုးချစ်စိတ် .. ဘယ်မှာလဲ ညီညွတ်ခြင်း စည်းလုံးခြင်းတွေ .. မြန်မာနိုင်ငံသားချင်းချင်း ကိုယ့်ရေမြေနဲ့ ဝေးရာ ကိုယ့်အိမ်မဟုတ်တဲ့ နေရာမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ရောက်လာရတာက မြန်မာချင်းချင်းအတွက် နှိမ်ဖို့ တဲ့ လား .. ??? လုပ်သားတွေနေရာက စဉ်းစားကြည့်ပါ .. အစကထဲကမှ စက်ရုံအလုပ်ထဲရောက်နေရလို့ အားငယ်နေမယ်ဆိုရင် အဲလိုခွဲခြားဆက်ဆံပုံမျိုးနဲ့ နေစရာကိုရှိတော့မှာမဟုတ်လောက်ဘူး .. ကိုယ်ချင်းစာတတ်ရင် အင်မတန် သနားဖို့ ကောင်းပါတယ် .. နိုင်ငံခြားမှာ ရောက်နေတဲ့လူတွေကိုတောင် ဒီလောက်ခွဲခြားနေရင် မြန်မာပြည်မှာကျန်ခဲံတဲ့ လူသန်း ၅၀ လောက်ကိုဘယ်လိုများသဘောထားပါလိမ့်မလဲ .. နိုင်ငံခြားမှာခင်ဗျားတို့ လို မနေနိုင်လို့ ဆိုပီး နှိမ်ပါသလား .. သိချင်မိပါတယ် ..
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ဘယ်လိုချစ်ပါတယ် … ဘယ်လိုကူညီစောင့်ရှောက်ပါတယ် ဆိုပီး .. ကိုယ်နာမည်ကြီးဖို့ တခုထဲနဲ့ မျက်နှာစိမ်း မျက်နှာကျက်ခွဲခြားပြီး မျိုးချစ်နေတာတွေကလဲ ရှက်တတ်ရင် သေလို့ တောင်ရတယ် .. ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်အိမ်မှာနေနေရင် ဒါတွေလိုက်ပြောမနေပါဘူး .. ကိုယ့်ရှေ့မှာ ပြောမယ့်သူတွေ အများကြီး မို့ လို့ .. သူများမြို့ ရွာမှာ ကိုယ့်ရွာသားချင်းချင်း ဆက်ဆံကြပုံတွေက သိပ်အထှာမကျတာတွေတော့ ထုတ်ပြောရမှာပဲဗျ ..
လူဦးရေ ၄၀၀ ကျော်ဆိုတာ သိန်းချီသောမြန်မာတွေရှိတဲ့ တခြားနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့ယှဉ်ရင် အပုံတသိန်းပုံ တပုံတောင်မရှိပါဘူး .. ဒါပေမယ့် အဲဒီနိုင်ငံက အပုံကြီးသာတာတခုက “ငါက ကုမ္မဏီပိုင်ရှင်မို့ လို့သူကတော့ အလုပ်သမားမို့ လို့” ဆိုပီး ဘယ်သူကမှ ဘယ်သူ့ ကိုမှ မနှိမ်ဘူး .. တယောက်နဲ့ တယောက်လက်တွဲခေါ်တယ် .. ဖေးမတယ် .. ကူညီတယ် .. အဲဒါတွေကြောင့်ပဲ သိပ်ပျော်ဖို့ ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတခု ဖြစ်လာတယ် .. ဘယ်လို တွေ့ ဆုံပွဲမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာတွေ အားလုံး ပါဝင်နိုင်အောင် အမြဲတမ်း စီစဉ်တယ် .. တိုးတိုးတိတ်တိတ်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာ တခါမှမတွေ့ ခဲ့ဖူးဘူး(ပါဆင်နယ် မပါ) .. မြန်မာချင်းချင်း တည့်တာမတည့်တာ ခေါ်တာမခေါ်တာကနောက်ထား .. လမ်းမှာတွေ့ ရင် မြန်မာလို နှုတ်ဆက်ရမှာရှက်လို့မတွေ့ ချင်ယောင်ဆောင်သွားတာတွေ နောက်ထား .. တခုခုဆို အားလုံးဝိုင်းလက်တို့ ကြတာကိုတော့ သတိရတယ် .. ညီညွတ်ကြတယ်ပြောရမလား .. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တပတ်နေလို့ တရက်မတွေ့ ဖြစ်ရင်တောင် အဲဒီနိုင်ငံလိုနေရာမှာ မြန်မာတွေကြားထဲ ကိုယ့်ဆီကို သူက မက်ဆေ့ခ်ျပေး သူ့ ဆီကို သူ က မက်ဆေ့ခ်ျပေးရုံလေးနဲ့ ပဲ ကောင်းသတင်းဆိုးသတင်း အင်ဖော်မေးရှင်းက အလွယ်တကူပျံ့ တယ် .. ဒီမှာက အဲ့ဒီမက်ဆေ့ခ်ျသိမစိုးလို့ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးလုပ်နေရတာ ခင်များတို့မပင်ပန်းဘူးလားဗျာ … ခင်ဗျားတို့ ကို အဲဒီလို လူ့ ပတ်ဝန်းကျင်အစစ်နဲ့ တခါလောက်တွေ့ ဖူးစေချင်တယ် ..
အဲဒီနိုင်ငံက ပညာတတ်မြန်မာတွေကရော လူလူချင်းကိုယ်ချင်းစာစိတ် စာနာထောက်ထားစိတ် အဲဒါတွေထက် .. ပူးပေါင်းလိုစိတ် မြန်မာချင်းချင်းချစ်တဲ့စိတ် ဘာလို့်ပို ရှိကြသလဲ ? ယုံလားတော့မသိဘူး .. သူတို့ ဘယ်လောက်ပညာတတ်တယ်လို့ ထင်လဲ .. ဒီက ပညာတတ်ဆိုတဲ့လူတွေ မှန်းကြည့်လိုက် .. အဲဒီမှန်းကြည့်တာထက် သူတို့ကပိုပညာတတ်တယ် .. ခင်ဗျားတို့ ပညာတတ်တယ်ဆိုတာ ဟိုကရီလိမ့်မယ်ဗျ ..
မင်းကဘာလဲ ? မင်းကဘယ်လောက်တတ်လို့ လဲ ? မင်းလခကရောဘယ်လောက်ရနေလို့ လဲ? မင်းကဘယ်လောက်သိလို့ဒါတွေလာပြောနေရတာလဲ ? .. လို့ကျုပ်ကို မေးပါ .. မေးနိုင်ပါတယ် .. ကျုပ်ဖက်ကလဲ သိပ်ကိုဖြေချင်ပါတယ် .. ကျုပ်ဘာမှမဟုတ်ဘူး .. သာမန်လူတယောက်ပါ .. စာလေးပေလေးနဲနဲတတ်တော့ တိုင်းတပါးကို ယောင်လည်လည်ရောက်လာတယ် .. ဒါပေမယ့် လူတန်းစားခွဲခြားတာကို သိပ်မုန်းတယ် .. ဘယ်သူကြီးဖြစ်နေနေ လူတန်းစားခွဲခြားပုံမျိုးနဲ့ ဆက်ဆံလာရင်တော့ ကျုပ်သီးခံမှာမဟုတ်ဘူး .. နောက် အနှစ် ၁၀၀ ဆို ခင်ဗျားတို့ လဲလစ်ပီ .. ကျုပ်လဲလစ်ပီ .. ကျုပ်ကတော့ ဒယ်အိုးကိုကြောက်သဗျ ..
ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသံရုံး တခုအနေနဲ့ လဲ မြန်မာနိုင်ငံတခုလုံးကို ကိုယ်စားပြုသောအားဖြင့် တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကိုယ့်အိတ်ထဲဖိတ်ရုံလောက် လုပ်နေတာမျိုး ကိုယ့်အိတ်အပြင်က မြန်မာတွေကို လုံးဝဂရုမစိုက်တာမျိုး မြန်မာနိုင်ငံသားချင်းချင်း အဆင့်အတန်းခွဲခြားတာမျိုး လူသားချင်းချင်းစာနာထောက်ထားသောအားဖြင့် မလုပ်မိစေချင်ပါ .. မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံရုံးဆိုတာ ရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးအတွက် ကောင်းအတူ ဆိုးအတူမျှဝေပေးဖို့နိုင်ငံတော်မှကိုယ်စား လာရောက်နေပေးထားခြင်းဟု နားလည်မိပါတယ် .. ပေါ်တင်ကြီး ထိုင်ရှိခိုးမနေရင်တောင် မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကတော့ သံရုံးကို အားထားကြတယ်ဆိုတာလဲ သိစေချင်ပါတယ် .. ” သံရုံးဆိုတာ ရုံးပဲပေါ့ .. ရုံးအထှာပဲပေ့ါ .. သူတို့ ဘာပဲလုပ်လုပ် ရုံးကလူတွေရဲ့အမျိုးတွေ အသိတွေလောက်ပဲ ပါကြတာ ရုံးအထှာပဲ” လို့စက်ရုံထဲကမြန်မာတယောက်က ပြောသွားတယ် .. မြန်မာနိုင်ငံမှာတုန်းက တွေ့ ခဲ့ကြုံခဲံ့ဖူးတဲ့ ရုံးအထှာတွေ ဒီအထိ ပါလာတာကို စိတ်မကောင်းပါ … မြန်မာသံရုံးကို မြန်မာတွေကိုယ်တိုင်က အဲဒီလို အမြင်မမှားစေချင်ပါ ..
လူတကာရှေ့ ထင်ပေါ်ဖို့ကိုယ့်ပုံရှေ့ ဆုံးမှာပါဖို့ လောက်လုပ်နေကြတဲ့ ”ပါလေရာ ငပိချက်” လူတစုလောက်ကိုမကြည့်ပဲ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးဆီကို အင်ဖော်မေးရှင်း အလွယ်တကူရောက်ဖို့ လဲ စဉ်းစားပေးစေချင်ပါတယ် .. လူများများလာစေချင်ရင် အားလုံးကို မလာလာအောင် ဖုန်းတဂွမ်ဂွမ်ဆက်ပီးခေါ်ပြီး .. (ပါဆင်နယ် ပါတီမျိုးကိုမဆိုလိုပါ) .. မြန်မာ တနိုင်ငံလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အသုံးအနှုံးမျိုးနဲ့ခေါင်းစဥင်္တပ်ထားတဲ့ ပါတီဖြစ်ပြီးတော့ ရှိတာမှ လူကလေး ၄၀၀ ဗျာ .. ဒါကိုပဲ လူတစုက လူတစုမသိအောင် တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကြိတ်လုပ်နေတာမျိုးတွေလဲ မဖြစ်စေချင်ပါ .. အားလုံးမပါစေချင်ရင် အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ စာသားတွေ မထည့်ရုံပေ့ါ .. ဒီလောက်တော့ နားလည်ပါတယ်ဗျ ..
ကိုယ့်နိုင်ငံကလူတွေနဲ့ တွေ့ကိုယ့်နိုင်ငံကစကားတွေပြော ကိုယ့်နိုင်ငံကသီချင်းတွေဆိုပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံက စားစရာတွေကို တပျော်တပါး စားသောက်ပျော်ရွှင်ရမယ့်အခွင့်အရေးမျိုး မြန်မာပြည်နဲ့ ဝေးနေတဲ့ ဘယ်မြန်မာမဆို ပါဝင်ချင်ကြပါတယ် … အဲဒီအချိန်တွေက စိတ်ရှုပ်ပင်ပန်း အိမ်လွမ်းနေတာတွေကို ဘယ်လောက်တောင် ဖြေပျောက်နိုင်သလဲဆိုတာ အားလုံးသိပါတယ် .. ဒါကြောင့် အဲဒီလိုအချိန်အခါမျိုးတွေမှာ ကွက်ကျားမြန်မာ မဟုတ်ပဲ မြန်မာအားလုံးပါဝင်လာနိုင်အောင် ကူညီစေချင်ပါတယ် ..
နွေခေါင်ခေါင်ကြီးမှာ ဗူးစင်ထဲ ခရမ်းဝင်သီးသလိုဖြစ်နေမလားမသိ .. မတတ်နိုင်ပါ .. အမြင်မတော်တာတွေဆိုရင် တနေ့ မဟုတ်တနေ့တယောက်မဟုတ် တယောက်ကတော့ ပြောလာကြမှာပါ .. ဖတ်ဖူးတဲ့ စကားပုံတခုရှိတယ် .. .. “ဘယ်သူမှ မသိစေချင်ရင် မလုပ်နဲ့ ” တဲ့ .. ရှင်းရှင်းလေးပါ .. ပညာတတ်တွေ ဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ ..
နှစ်သစ်မှာ နှစ်ဟောင်းက စိတ်အနှောင့်အယှက်မျိုးတွေနဲ့ကင်းဝေးကြပါစေ။
“စက်ရုံအသိုင်းအ၀ိုင်းကလူတွေက ကျောင်းအသိုင်းအ၀ိုင်းကလူတွေလို တွေးခေါ်တတ်မှာမဟုတ်ဘူး အတွေးအခေါ်တူမှာမဟုတ်ဘူး ” ……………..
အတန်းပညာတတ်တာဟာ၊ ဘွဲ့တွေတန်းစီနေတာဟာပညာတတ်မဟုတ်ပါဘူး။ သင်လို့ရထားတဲ့သင်ညာတွေပါ။
အမှန်အမှားကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားရှိတဲ့ လူ တယောက်ဖြစ်မယ်။ လေးတန်းတောင်မအောင်ဘူးဆိုလဲ
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖော်မသူတော် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖျက်သံချေးတက်နေသူတွေကိုတော့ ကျနော်က ပညာတတ်စာရင်းမဝင်ဘူး
လူ့တန်ဖိုးဟာ ဘွဲ့လဲမဟုတ်ပါဘူး။ကျောင်းလဲမဟုတ်ပါဘူး။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ထွက်ထဲမှာလည်း ဆေးစွဲနေတဲ့
ကိုယ့်ဘဝ ရပ်တည်ချက် ဘယ်နေရာမှာဘဲရှိရှိ စိတ်ဓာတ်အဆင့်အတန်းကသာ လူ့တန်ဖိုးမလို့ အဲဒီလို ပညာတတ်ယောင်
ဆောင်ပညာမဲ့ တွေရဲ့ စကားကိုစိတ်ထဲ ထားမနေပါနဲ့လို့ ပြောပါရစေခင်ဗျား။
ဟုတ်ပါတယ် အကိုသစ်မင်းရေ .. အကိုသစ်မင်းပြောသွားတာ အရမ်းကိုတန်ဖိုးရှိပီး အားလဲတက်ရပါ .. အဲဒီစကားတွေနဲ့ပဲ ကိုယ်တွေလိုသူငယ်ချင်းတွေကို အားပေးပါ့မယ် .. ဟိုလူတစုကတော့ သူ့ လူနဲ့ သူ့ စာရင်းနဲ့ကွက်တိပါပဲ .. စကားတွေတင် ပြောခံခဲ့ရတာမဟုတ်ပါ .. မတော်တဆ တွေ့ ဆုံခဲ့ရတဲ့မိနစ်ပိုင်းလေးမှာတောင် မျက်နှာကို ချီနေအောင် နေတတ်ကြတဲ့သူတွေပါ .. ရှိပါစေလေ ..
တစ်နယ်တစ်ကျေးရောက်နေတာတောင်..အ၀ှာ ပြုနေကျတာ မကောင်းပါဗျာ..
အနော်တို့ က ပြောမှသိမှာဗျ..
ဒါမှ အဲဒီနိုင်ငံရောက်ဖြစ်ရင် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေ..သိလာမှာ
အားလုံးကို သိစေချင်လို့ ပြောရပါတယ် .. ဟုတ်ပါတယ် .. အဲဒီနေရာရောက်ခဲ့ရင်တော့ ဖတ်ထားတာတွေ သတိရပေးပါဗျာ …
မည်သူမဆို ခေါ်ခြင်သည်ဖြစ်စေ မည်သူမဆို မခေါ်ခြင်သည်ဖြစ်စေ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကိုယ့်ဘ၀အခြေအနေ ကိုယ့်အားကိုကိုးလို့ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားရမလေ…
ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားနေကြချင်းတူတူ စိတ်အနှောင့်အယှက်ကင်းကင်းလေးနဲ့ စားရတော့ ပိုဝင်တာပေါ့ ကန်ဂျိုဆန် ရယ် ..
အဲဒီ သင်ညာ တတ်တွေအကြောင်း
ကို Yinglamp ရေးပြတာ
“လူအချင်းချင်း နေရာပေး တန်ဖိုးထား .. ”
ဟုတ်တယ်ဗျ .. ရုပ်ဝတ္တုတွေထက် လူကိုတန်ဖိုးထားတတ်ကြဖို့ အချို့ မြန်မာလူမျိုးတွေကို အစကနေပြန်သင်ပေးရမယ်ထင်တယ်ဗျ ..
ကိုရင်လန့် ရေးပြတဲ့သူတွေ ခန့် မှန်းကြည့်ရတာ ၊ ရွာတို့ နယ်တို့ က ၊ လယ်ရောင်းပြီး ရောက်နေတဲ့ ဟာတွေ နေမှာပါဗျာ ။
ခမာမြေ က လည်စရာပတ်စရာ အကြောင်းလေးတွေ ကို လည်း တင်ပြပေးပါဦးဗျို့ 
ရွာတို့ နယ်တို့ ကတိုင်း မဟုတ်ရပါဘူး မောင်ပေရယ်။ လူရဲ့ စိတ်အဆင်အတန်းနဲ့သာ ဆိုင်တာပါကွယ်။ မြို့ကြီးပြကြီးနေပြီ စိတ်အနေ အောက်တန်းကျသူတွေ အပုံကြီးပါကွယ်။ အပြင်ရောက်မှ မမြင်ဖူးတာမြင်ရ မစားဘူးတာစား၇ မနေဖူးတာ နေ၇တော့ အဟုတ်ကြီးထင်ပြီး ဘ၀င်လေဟပ် မေးကို အောက်မချပဲ ဘာမဟုတ်တာကို မာန်တက်နေတာတွေ မြင်ရတော့ ကြည့်ပြီး သံဝေဂတောင် ရပါသေးတယ်။
တောကရယ် မြို့ ကရယ် တော့ မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်တွေကတော့ ရန်ကုန်သား ဆိုရင်ကို နာမည်နဲ့တင် တ၀က်ကဖျားနေပါပီ .. အဲဒီ ထဲမှာ ရန်ကုန်သားက ၈၀ ရာနှုန်းပါပါတယ် .. ရန်ကုန်သားအားလုံးကိုမဆိုလိုပါ .. ဒါပေမယ့် ရန်ကုန်သားတွေက ရှေးထဲက ထုံးစံအတိုင်း လိုက်ရင်းနဲ့အဲဒီအထှာတွေ အဆင့်ဆင့်ဆက်ခံရင်း ရန်ကုန်သားဆိုရင် ဒီအထှာတွေနဲ့ ပဲဖြစ်ကုန်သလားတော့ မသိပါဗျာ .. ကိုယ်တွေက တောင်ပေါ်ကပါ .. နယ်ကလူတွေ တောကလူတွေ တောင်ပေါ်ကလူတွေက ရိုးရှင်းပါတယ်ဗျာ ..
ပညာတတ် တဲ့သူ ညစ်ရင်
ပညာမတတ် တဲ့သူ ထက် ပိုဆိုးတယ် နော
အဲလိုသိုးမည်းတွေက အခြားနိုင်ငံတွေက မြန်မာလုပ်သားတွေထဲမှာလဲ အနည်းစုအနေနဲ့ ရှိကြပါတယ်။
မြန်မာအများစုကလဲ သူတို့ကိုအဖက်မလုပ် အခြားလူမျိုးတွေကလဲ သူတို့ကို အဖက်မလုပ်နဲ့ ဖြစ်ကုန်တာပါပဲ။
ဟာ .. ဟုတ်တယ်ဗျ .. သူတို့ အိုးနဲ့ သူတို့ ဆန်တန်နေတာနဲ့ ပဲ ဘေးလူတွေ နောက်လူတွေက ကြွက်ချေးတွေဖြစ်ကုန်သလိုလို .. တကယ်တော့ သူတို့ ကလဲ မခေါ်ရဲတော့တာလဲ ဖြစ်မယ်ဗျ ..
ညီလေးမောင်ပေရေ ကိုယ်လဲတောသားပါပဲကွာ တောက၊နယ်ကမို့လို့ ထူြး့ပီးရိုင်းသွားတာတော့ မဟုတ်ရပါဘူး မြို့မှာရော တောမှာပါ လူကောင်း၊လူဆိုး၊လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ ရှိကြပါတယ်၊ ဘယ်နေရာ၊ဘယ်ဒေသရောက်ရောက် ယဉ်ကျေးခြင်း၊မယဉ်ကျေးခြင်းကတော့ ပြုမူသူရဲ့ ၀မ်းစာပြည့်ခြင်း၊မပြည့်ခြင်းနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်ပါတယ်။
ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသရောက်ရောက်ပါ .. သူ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ပဲဆိုင်တယ် .. ဟုတ်ပါတယ် .. သူတို့ သာ ဒီစာကို ဖတ်မိပြီးရင် အပင်မြင့်လို့ လေတိုက်တယ် လို့ များမာန်တက်နေဦးမလားမသိ . . မပြည့်တဲ့ အိုး ဘောင်ဘင်ခတ်သံတွေက ပိုကျယ်ပါတယ် .. နော့်ဗျာ ..
ကိုရင်းလန့်ရေ ကျနော်သိချင်တာကတော့ ထိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအို အဲဒီ၃နိုင်ငံက ရေးတဲ့ စာလုံးတွေက တူသလိုပဲနော် ဘယ်နေရာတွေမှာတူပြီး၊ဘယ်လိုနေရာမှာကွဲပြားခြားနားတယ်ဆိုတာလေးကို ကိုရင်းလန့် အချိန်ရရင် လေ့လာပြီး ဂေဇက်မှာတင်ပေးပါလားခဗျာ၊ပြီးတော ကိုရင်းလန့်ရဲ့ စက်ရုံလုပ်ငန်းခွင်ထဲက ပျော်ရွှင်စရာ၊စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့ ပင်ပန်းခဲ့တဲ့ နေ့ရက်တွေအကြောင်းအပါအ၀င်၊ခမာမြေရဲ့ လှပတဲ့ရှုခင်းပုံလေးတွေနဲ့ ကိုရင်းလန့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ဂေဇက်မှာ တင်ပေးပါလို့ အကြံပေးတိုက်တွန်းပါရစေ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ .. ဒီလိုစာမျိုးကလဲ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူနဲတယ်ဗျ .. ကျနော်က မျှဝေချင်လို့သာရေးပီးတင်လိုက်ရတာပါ .. ကို kyawtheinmyint တို့ လို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေရှိနေရင်တော့ ကျနော်ဆက်ရေးဖို့ ကြိုးစားပါ့မယ် .. ထပ်ပြီးကျေးဇူးပါ ..
ရေခြားမြေခြားရောက်မှ မဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ဝန်းကျင်နားလေးတင်ကြုံနေတာ
ငါသာတတ် ငါသာလျှင်မြတ်၏လို့တွေး သွေးနားထင်ရောက်ပီး လူချဉ်ဖတ်ဖြစ်နေတဲ့
တက်ကနော်လော်ဂျီဘွဲ့ရ စာတီဖီကိတ်တစ်ထပ်ကြီးကိုင်ထားတဲ့ ဟာတွေနဲ့ နေ့စဉ်ရက်ဆက်ကြုံခဲ့ဖူးတယ် သူတပါးအမှား/အားနည်းချက်တွေကို ရှာဖွေစိတ်ဆိုး တစ်ချိန်လုံးလက်ညှိုးထိုး နေပီး သူတို့အမှားကွင်းကွင်းကြီးပေါ်သွားတာတောင် ထောက်ပြလို့ ထိခိုက်သူတွေကို
မေတ္တာရှင် ဆရာတော်( ရွှေပြည်သာ) ပြောတဲ့` မြန်မာတွေ ဘာကြောင့်မချမ်းသာတာလဲ ´ထဲ မှာ ရေးထားပါတယ်။ ဘယ်သူက ပညာတတ် ဘယ်သူက ပညာမဲ့ ဆိုတာ ပါ ပါတယ်။ ဖတ်ကြည်လိုက်ပါ။ ဒီ ဂေဇက်ထဲ မှာ အဲဒီပို့စ် ရှိနေတယ်ထင်ပါတယ် ။
သိပ်ကောင်းတဲ့အိုင်ဒီယာပါ .. ဒီလိုဆိုရင် အစ တော့ ကိုယ်ကိုတိုင်ပဲ စ ရမှာပဲ .. ကြိုးစားကြည့်တာပေါ့ဗျာ .. ကျေးဇူးပါ ..
သာရေး၊ နာရေးဖြစ်ရင်.. ငွေစုကောက်လိုက်ပါ..။
ကူညီလိုက်ပါ..။ ၁နှစ်မလုပ်ရပါဘူး..။ ပညာတတ် ဆိုသူများပါ.. လာပြီးပါဝင်ကူညီပါလိမ့်မယ်..။
တကယ်တော့…အလုပ်သဘောမှာ.. အောက်ခြေအတန်းကော်လာပြာတွေက.. ယူနီယံ(သမဂ္ဂ)ဖွဲ့ရပါတယ်.။
နောက်ထပ် စာအရေးကောင်းသူတစ်ဦး ကို
ရွာ့ ဂျလေဘီ ဂီဂီ ကကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျား..
လူတန်းစားခွဲခြားတယ်ဆိုတာ နေရာတိုင်းရှိနေတာပဲ …
အသိပညာနဲ့ အတတ်ပညာ မကွဲပြားတာလည်း နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေတာပဲ။
ဘာမှ မတည်မြဲတာတွေကို အာရုံအနောက်မခံပါနဲ့ဗျာ။